Idiro lalindalina kokoa ! | NewsMada
Idiro lalindalina kokoa !
Raha hanorin-tokantrano ny Malagasy, fahiny, tsy maintsy nofantarina : iza ity horafozanina ? Taranak’iza ity ho vinanto ? Nohadihadiana hatrany amin’izay takatry ny tadidy vava sy ny lovantsofina ny tany aloha rehetra tany. Sao sanatria taranaky ny olona tsy faka taranaka. Tsy te hanan-dratsy ny Malagasy teo aloha ka naleony namakafaka sy nanadihady lalina.
… Ny tokantrano aza, tahaka izany ny fomba nananganan’ny Malagasy azy vao mainka fa ny firenena ! Raha te hanana firenena vanona, fotopotory lalina ireo kandidà mba tsy ho tra-nenina any aoriana. Aza variana amina endrika sy fihetsika ivelany satria fandrika sy paikady efa nahazatra ny mpilalao politika ireny ka tsy tokony hahavoa intsony.
Tsy ananan-tsiny akory ny manadihady fa efa fomba fanaon’ny Malagasy. Antony iray nampirindra ny fiarahamonina fahiny io. « Ny razantsika, hendry sy lalim-pandinihana », hoy ny tononkira iray izay. Inona ny sakana tsy hanadihadian’ireo manan-jo hifidy ny momba ny kandidà tsirairay ? Izao io olona io ? Taranak’iza ?
… Ilaina ny fanaovana izany mba tsy hisian’ny tsy hampoizina any aoriana. « Ny tarana-boanjo, foto-boanemba », hoy ny Ntaolo. Mety tsy ho sarotra ihany koa ny manao fanadihadiana momba ireo kandidà ireo satria efa maro ny fomba ahazoana manao izany. Ao ireo raiamandreny izay inoana fa tsy hamahan-dalitra ny taranany. Eo ihany koa ny tahirinkevitra samihafa. Ny siniben-tserasera isan-karazany.
Amin’ny vanim-potoana tahaka izao no tena ahatsapana ny hasarobidin’ny tahiry sy ny tadidy vava ary ny lovantsofina. Tsy nisy firy na tsy nisy mihitsy izy ireo (tahirinkevitra, tahirintsary, teknolojia fitahirizana, sns) fahiny kanefa nahay nisafidy tsara ny Malagasy vokatry ny fanaovana fanadihadiana.
… Koa fantaro tsara izay hiantefan’ny safidy satria zon’ny tsirairay rahateo ny manao izany mba tsy hihinana amam-bolony sy hampidi-kizo ny firenena iombonana !